Ubuhle nempilo Izimonyo
Esikwesikhwameni sezimonyo kunoma yimuphi wesifazane ungathola i-lipstick. Futhi uma ngaphambi kwesiphetho esinengqondo sesithombe somodeli wefashini kwakuthandwa ngosizo lwe-pearlescent noma ama-shadow shades, namuhla ekuphakameni kwe-fashion matte lipstick.
Iyiphi inzuzo i-lipstick ye-matte?
Inzuzo enkulu ye-lipstick ye-matte yi-versatility yayo. Ngokungafani ne-mother-of-pearl nezindebe ezinamahlombe ezimhlophe zifanele kunoma yisiphi isimo, esifanele cishe noma yikuphi ukugqoka nokwenza. I-pluses yezimonyo ezinjalo ingabonakala futhi esakhiweni sayo esinomsoco ngisho nombala, ohlinzekwa yingxenye ephezulu ye-powder ekubunjweni kwayo.
Kuhle kakhulu ukwakheka kwamalanga, njengoba kuzinzile futhi akudingeki kulungiswe njalo ngehora;
ugcizelela kahle umbala omhlophe wamazinyo;
enothile nge-vitamin kanye nezondlo zokudla okunomsoco.
Ukushiyeka okukodwa kwalesi sigqoko se-lipstick yi-dryness eyenza ezindebe, ngenxa yokuthi ukubukeka kwabo kungakuthola kancani. Kodwa, uma unaka ukwakheka kwe-lipstick ye-matte ezindebe zakho, ungagwema imiphumela engathandeki: izingxenye ezinamafutha kulesi sifo kufanele zifane ne-lipstick evamile.
Ukukhetha i-lipstick ye-matte
Uchungechunge lwe-matte lwezintambo zezindebe manje selusemigqeni yemikhiqizo eminingi. Isibonelo esidume kunazo zonke inkampani ye-MAC matte. Kuyinto umkhiqizo wakhe abaningi abazenzayo abaculi basebenzisa amaviki amanje. Yibonge kuqala endaweni emnyama yomthunzi obomvu we-Ruby Woo matte lipstick. Kusetshenziswe kangcono nge-pad pad noma nge-brush, ngakho-ke uma ukhetha ukudweba izindebe zakho kuphela kwiphubhu, khona-ke uzobe ufaneleka ngokwengeziwe kwi-lipstick ye-NARS. Lo mkhiqizo ubamba ubulili obuhle ngokukhetha okungafani kwemibala, kodwa umbala wezintambo we-lipsteck udlulele konke okulindelekile: uzothola umbala omuhle futhi uphuze izindebe zakho.
Abathandi bekhono lokunethezeka kanye nabasekeli bezintambo zemilenze yokukhanya emvelo kufanele nakanjani bazame imikhiqizo ye-Chantecaille Lip Matte. Banobunjwa bokukhilimu, kodwa kuthatha isikhathi esincane ukuba somile futhi siphenduke isiphetho se-velvet.
I-lipstick ye-liquid yamathambo ithandwa kakhulu kunomile, kodwa khumbula ukuthi izingulube ezomile ezingangenangqondo Inglot ne-MUFE ziyinkimbinkimbi futhi zingasetshenziswa njengezithunzi zeso.
Iphalethi ye-shade ye-lipstick yamatte
Kunemithetho eminingana eyisisekelo ezosiza ekukhetheni umbala ofanele we-lipstick:
Ungakhohlwa ukuthi i-lipstick ye-matt burgundy ibheka amahle hhayi kunoma yisiphi isindebe. Ngakho-ke, akuhambisani nabanikazi bezindebe ezincane, ezincane, okudingeka zibukeke zengeze ivolumu.
I-pink matte lipstick iphelele ebusweni obusha obuncane obuncibilikisiwe.
Amantombazane anezikhumba ezimhlophe zeqhwa asetshenziselwa ukugcoba umlomo we-matte beige.
Abesifazane abadala kanye nalabo abakhetha ukwenza i-makeup "i-smokey ayz" , abanikazi bezintandokazi batusa ukusebenzisa izinsimbi zomlomo ngokukhanya.
Futhi, ukhetha i-lipstick ekhanyayo, qeda izithunzi eziluhlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza, ngoba le nhlanganisela ibukeka ingcolile.
Indlela yokusebenzisa i-lipstick matte?
Faka isicelo se-lipstick ekhanyayo noma ephukile, hhayi njengokujwayelekile. Basebenzisa, ngokulandela inqubo ekhethekile:
Ngaphambi kokwenza imaski yezindebe noma ukusebenzisa i-cosmetic balm ukususa zonke iziphambeko ezindebe;
qiniseka ukuthi usebenzisa isisekelo sokusondeza;
Ipensela ezungeze umjikelezo wezindebe;
Uma une-lipstick ekhanyayo, ke kubalulekile ukuthi usebenzise isendlalelo sokuqala, kancane kancane i-powder izindebe uphinde ukhombe okwesibili;
ukuthola izindebe ezimanzi nge-napkin.
Indlela yokwenza i-matte lipstick?
Ingabe ufuna ukufezekisa umphumela we-matte, kodwa awukakutholi okwamanje? Ungakhathazeki. Kukhona indlela yokwenza i-lipstick ye-matte. Bhala izindebe zakho nge-lipstick evamile, gwema izindebe zakho nge-napkin encane bese usebenzisa i-napkin efanayo kakhulu.
Ungasusa kanjani induna?
I-lipstick ebomvu yama-blondes
Indlela yokudonsa amehlo akho nge ipensela?
Beautiful evening ukwakheka
Indlela yokubukela ukunciphisa impumulo?
Powder for isikhumba inkinga
I-resistant nail polish
Izithunzi zamehlo aluhlaza
Faka i-enterosgel kusuka ku-acne
Yimiphi imithi yokutshala kusayithi?
Amafutha Okubalulekile we-Neroli
Ukwakhiwa kwegumbi labantwana abancane
Indlela yokwenza manicure?
Abazingeli bamagugu: Kendall Jenner noParis Jackson befuna izinkinga!
I-Pyoderma - izimpawu
Amaphiko e-honey sauce - izindlela zokupheka ezingcono kakhulu nezesiphuzo
I-Underwear Underwear e-Brubeck
Ukuthosiwe inyama - zokupheka
Geza ibhasi ngamanzi ashisayo ama-cottages
Ungakhetha kanjani izingubo zangaphansi ezishisayo?
Amabhuzu ebusika asebusika 2017-2018 - yiziphi izinhlobo ezizobe zifashiswa kulobu bushi?
Indlela yaseCuban yokwelapha unyawo lwesifo sikashukela
Izipho zabafana zonyaka omusha